Ukuzijabulisa | May 2022
Imilayezo Enamandla 10 UBeyoncé Uthumela uJay Z kuLemonade — noma i-So We Think
Yize asenzele i-albhamu engakholeki sonke, kubonakala kucace ukuthi ukhuluma nomuntu oyedwa kuphela.
Umlandeli Wentombazane Ehleba Wabona Iphutha Lezemfashini Elikhulu Ongasoze Wakwazi Ukulibona
Umsebenzisi we-TikTok uvele waveza iphutha lemfashini elihlekisayo ku-'Gossip Girl, 'futhi izinkulungwane zabalandeli zikhuluma ngakho.
Abashadikazi Abakhulu Kakhulu Bango-2018
Lapha, uhlu lwemibhangqwana engu-13 enkulu yosaziwayo eye yabona ukuhlukana, izimonyo, ukubandakanyeka, umshado nesehlukaniso ngo-2018.
UHilarie Burton usanda kuvula okwenzekile okwamshiya ekhihla isililo kusethi 'One Tree Hill.'
Izikhathi ze-11 ze-Iconic Seinfeld Asikwazi Ukulinda Ukuze Siphinde Sikhulule Ku-Hulu — kuma-GIF!
Uma ngabe ungezwanga, iSeinfeld iyichungechunge lakamuva lenkolo lokuthola isivumelwano sokusakaza: Zonke izinkathi eziyisishiyagalolunye zama-90s zakudala zizoshaya uHulu kuloJuni, esivumelwaneni esilingana cishe namaRandi ayizigidi eziyi-180, ngokusho kwe-Variety. Lokho kusho ukuthi akusadingeki uthule ama-DVD akho noma uvulele i-TBS njalo kusihlwa ngo-6 P.M. ukuthola ukulungiswa kukaJerry, uGeorge, u-Elaine noKramer — uzokwazi ukubukela okufunwayo, njengoba uthanda. Nazi izikhathi eziyi-11 zakudala esingakwazi ukulinda ukuphinda sizibuke kaninginingi (kepha kuze kube nguJuni, lawa ma-GIF azokwenza). Izandla Zomuntu (Isikhathi Sesi-8, Isiqephu 3) Unyaka kwakungu-1996: 'Izandla zomuntu' zangena esilulumagama sethu, futhi ukuphola kwaguqulwa unomphela. Ukudansa kuka-Elaine (Isizini 8, Isiqephu 4) Ngiyazi ukuthi lezo zinyathelo sezishisiwe ebuchosheni bakho amashumi eminyaka. Kwethulwa: I-Festivus (Isikhathi sesi-9, Isiqephu 10) Iholide lethu eliyinkohliso esilithandayo lokugubha njalo ngoDisemba 23. Ihembe Elidumbayo (Isikhathi Sesi-5, Isiqephu 2) Ngabe kwake kwaba khona i-athikili yezembatho edume kabi emlandweni we-TV? Yisole ngeDingo (Isikhathi sesi-3, Isiqephu 10) Kukuthathe isikhathi esingakanani ukuthola ireferensi ka-Elaine yedingo? Izifundo ku-Subway Etiquette (Isikhathi sonyaka 3, Isiqephu
Le Lindsay Lohan-David Letterman Ingxoxo Ka-2013 Yenza Abantu Bangakhululeki Kakhulu
Ingxoxo yasebusuku yango-2013 phakathi kukaDavid Letterman noLindsay Lohan 'iyashaqisa' abasebenzisi abaningi be-Twitter.
Izingoma ezi-5 ze-Groove-tastic Asikwazi Ukuyeka Ukulalela!
Sibuya nesinye isitolimende sezihlabelelo 'Angikwazi Ukuyeka Ukulalela' kuMsombuluko Omusha woMculo wakuleli sonto. Muva nje, bengilokhu uShazam'ing evusa isivunguvungu, ngakho ngazizwa ngiphoqelekile ukuthi ngihlanganyele neyodwa, kodwa izinto ezinhlanu engizifise kakhulu kamuva nje. Uhlu lubandakanya amaqembu amabili ezelamani kanye nenqwaba yezingoma ezi-moody ongazifaka ngaphansi komculo we-makeout. Lalela, ubuke, futhi wazi amaqembu angaphansi. Futhi usazise ukuthi ucabangani!
Ukubheka emuva kuBrad Pitt no-Angelina Jolie kuma-Oscars Ngokuhamba Kweminyaka (Ukuqala Lapho U-Angie Wayeneminyaka Engu-10 ... futhi Kuphefumulelwe Ngokusobala NguMadonna)
Kuphephile ukusho ukuthi uBrad Pitt no-Angelina Jolie bazoba yizithandani ezithwetshulwe kakhulu kuma-Academy Awards ngeSonto. Ama-flashbulbs acima njengezibani ze-strobe eklabhini ngokushesha nje lapho efika noma yikuphi, ngakho-ke ungacabanga nje ukuthi afike emcimbini omkhulu wonyaka. Yize bebehambele umbukiso wemiklomelo odumile ndawonye kanye nje - ngo-2009 ngenkathi egqoka lelo gown elimnyama lika-Elie Saab nalawo okuzofiwa ngawo ngamacici ka-Lorraine Schwartz e-emerald - bobabili banomlando omude no-Oscar. Ake sibheke emuva ekubonakaleni kwabo (nezinsuku ezahlukahlukene!) Eminyakeni edlule ...
Abashadikazi beBachelorette neBachelor Bendawonye: Uhlu Oluphelele
Yimiphi imibhangqwana 'ye-Bachelorette' ne-'Bachelor 'esahlangene? Ake sibheke emuva ezingeni lempumelelo yayo yonke imibhangqwana edlule ye-'Bachelor 'ne' Bachelorette '.
Abaculi Abasha Namantombazane Ahamba Phambili ku-YouTube
Uyamazi lowo mngani wakho opholile okwazi ukuhlunga zonke izinto eziyintambo ku-YouTube futhi athole abaculi abasha abangaluthayo? Halala, manje usungumngani opholile lowo. Bhalisela iziteshi zamantombazane manje, kubukeke njengongqondongqondo lapho ziqhuma kamuva. UDANIELA ANDRADE U-Andrade unelinye lalawo mazwi enza konke kuzwakale kuthinta inhliziyo — lokhu ngingakusho ngokuqiniseka ngemuva kokulalela ikhava yakhe kuwo wonke umuntu kusukela eNirvana kuye eBeyonce. Ngifuna enze ingoma yonke entweni epholile, i-stat. UJAMIE GRACE UGrace, oneminyaka engama-20 nje kuphela, uyisimo esiqinisekisiwe esiku-inthanethi — umsindo wakhe wesigingci obizwa ngokuthi yi-boppy uyahlekisa futhi amazwi akhe aqotho futhi amnandi. UVALENTINA LISITSA Uma uthanda ukwephula umthetho kwamatshe kaLindsay Stirling, uValentina uyena ozokuphonsela kuwe okulandelayo — ukhipha izingoma zamapiyano ngokunemba nokuqina okumangazayo. Ubufakazi bokuthi izinto zakudala zingaholela ekutheni usuku lwakho luqhubeke nomdlandla omkhulu njengo-Iggy Azalea. I-CIMORELLI Thanda lokhu: Odade abayisithupha baseCali bakha ibhendi yamandla amakhulu ebopha izembozo ezicebile kakhulu, ezilayishiwe. (Akumangazi ukuthi inguqulo yabo ethi 'Inkinga,' ngenhla, inokubukwa okucishe kube yizigidi ezi-3.) Maka amazwi ami: Bazothola isivumelwano nohlelo lwabo lomculo lwe-TV ngonyaka olandelayo.
Ngiyazithanda Lezi Zithombe Ezifingqiwe Zokunyonyobela U-Elizabeth Olsen noDakota Fanning Ukudubula Amantombazane Ahle Kakhulu
Kuyashisa, kuyashisa, kuyashisa eNew York. Sekuyisikhashana. Kodwa-ke ngibheja ukuthi izinto eziningi ezidutshulwayo lapha kuleli hlobo ngandlela thile zizogcina zibukeka zilungile ku-TV - akekho umuntu ozobe ecwebezela, futhi izingubo zomsebenzi zizobukeka zithwala kahle.
Hlangana noNatalie, u-Emily, no-Alyvia Alyn Lind: Odadewabo Sebezothatha IHollywood
UNatalie, u-Emily no-Alyvia u-Alyn Lind bazobe bedlala kuzikrini ezinkulu nezincane lokhu kuwa. Nakhu ukuthi bazoba nini isikhathi eside.
Imisebenzi Engcono Kakhulu yeNaya Rivera ku-Glee Engasoze Yalibaleka
Buka ukusebenza okuhle kukaNaya Rivera njengoSantana Lopez ohlelweni olushisa izikhotha iFox 'Glee,' kusuka ku 'Landslide' kuye ku 'Valerie.'
Ama-35 Osaziwayo Nabazali Abadumile Okhohliwe Ngokuphelele
Le nzalo yabantu abasezingeni eliphakeme laseHollywood basebenzise udumo abaluthole njengefa ukuzisungulela imisebenzi yabo. Nalu uhlu losaziwayo olunabazali abadumile.
Ama-Olimpiki Asehlobo Ase-2012 Abesifazane Abafudula Izingqondo Zethu
Ngokokuqala ngqa, i-U.S ithumela abasubathi besifazane abaningi kuma-Olimpiki kunamadoda. Hlangana nesikhombisa salezo zinkanyezi zedwala lapha - bese ulungele ukubathokozisa eLondon.
UKourtney Kardashian noTravis Barker Izilimi Ezithintwe Ngamagama ku-MTV VMAs 2021
UKourtney Kardashian noTravis Barker bathinte izilimi ngokoqobo kwiMTV VMAs 2021. Kwakuwukuqala kwabo kukhaphethi obomvu njengezithandani.
Nakhu ukuthi uJulia Roberts Uphele Kanjani Kuleso Siqephu Sobungane Bomngane
Ama-cocreators we 'Abangane' aveze nje ukuthi uJulia Roberts wagcina kanjani njengenkanyezi yezivakashi ku-'One After the Superbowl '
U-Anne Hathaway Ukhungathekiswe Ngokuthokozile Ekuvuseleleni Abathakathi
U-Anne Hathaway udidekile ngokuthokozile ekuphindeni 'Kwabathakathi'. Kungukusebenza kokuhlafuna ubuhle bamaphupho ami.
2 Ama-Trailers Wokubona Okufanele Wenzelwe uYa: SingabakwaMiller noDon Jon
Kungcono kakhulu uma enye yezintandokazi zakho ine-movie entsha esendleleni, futhi iba ngcono kakhulu (ingcono kunokuhamba phambili!) Lapho ezimbili zazo zenza. Namuhla, labo bobabili nguJennifer Aniston, one-We the the Millers out ngo-Agasti, noJoseph Gordon-Levitt, onoDon Jon ngo-Okthoba 18. Futhi i-BTW, akusiko ukuphela kwezintandokazi zethu kulawa ma-movie - hhayi nge ukudubula okude. Abanye babangane bethu abanjengo-Ed Helms, uJason Sudeikis, u-Emma Roberts, uNick Offerman, noScarlett Johansson bayahlanganyela, phakathi kwabanye. Bheka: Yebo. Nginomuzwa wokuthi singabakwaMillers kuzoba kuhle kakhulu - futhi ngeBreaking Bad emuva ngenyanga efanayo, ngokusemthethweni yinyanga ye-RV esikrinini — kanti ngenkathi uDon Jon eqinisekisiwe ukuthi uzosibona i-JGL ngendlela efanayo futhi, ngiyamangala. Futhi ngifela iJerseylicious Scarlett. Yikuphi kulokhu ozokubona? Isithombe: IMDB
Zonke izindaba ze-Real-Life ezethusayo ezikhulunywe ngendaba ye-American Horror
Isitolimende sakamuva sikaRyan Murphy seAmerican Horror Story, iHhotela, kulindeleke ukuthi siqale ukukhombisa kusihlwa, okuzojabulisa izicubu zethu ezisabekayo. Imininingwane eminingi ngale sizini entsha ibigcinelwe ukusongwa okuqinile, kodwa esikwaziyo vele ukuthi iHotela inabalingisi abamangazayo — kanti ezinye izindaba ziyizimpande. UMurphy uveze ukuthi ihhotela elisenkabeni yesakhiwo, iHotel Cortez, lizinze eLos Angeles 'Hotel Cecil, lapho kuhlala khona ababulali abaningana (URichard' the Night Stalker 'Ramirez, uJack Unterwerger) nalapho intokazi, u-Elise Lam , washona ngendlela engaqondakali ngo-2013. Leli hhotela futhi lingezinye zezindawo zokugcina lapho u-Elizabeth Short, umlingisi owaziwa nge-'Black Dahlia, 'agcina ukubonakala khona ngaphambi kokushona kwakhe. (Khuluma nge-creepy.) Kepha lokhu akusikho okokuqala ukuthi i-AHS idonse ugqozi kubantu abesabekayo, beqiniso bempilo, izindawo nemicimbi. Nazi izindaba eziyiqiniso eziyi-10 ezesabekayo eziye zadlala kwi-American Horror Story — funda ngazo uma uzoba nesibindi. Isizini 1: Indlu Yokubulala IBlack Dahlia Mena Suvari uvele esiqeshini sesizini yokuqala njengo-Elizabeth Short, umdlali wangempela ongumlingisi owaziwa kangcono ngokuthi 'The Black Dahlia.' Mfushane wayengumlingisi onesifiso sokulingisa oneminyaka engu-22 ngesikhathi etholakala
washada uJustin bieber
yiziphi izinhlelo ze-tv ezikhanseliwe
okhalweni oluphakeme olunamahlombe phansi kwebikini
ingabe kombucha akulungile kuwe
uKim kanye kanye noqhekeko luka-2016